दाङमा सवारी दुर्घटनाका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु – Pahilo Page
दाङमा सवारी दुर्घटनाका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
१ पुष २०७५, आईतवार १६:४४ 712 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १ पुस । दाङमा आइतवार भएका दुई अलग अलग दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आइतवार दिउँसो २ बजेतिर घोराही–लमही सडकखण्डमा पर्ने लमही नगरपालिका वडा नं. ५ कुलमोडमा नेपालगञ्जदेखि घोराहीतर्फ आउँदै गरेको ना ४ ख ९५६६ नं. को बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको रा ३ प ९६०४ नं. को मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका बाङ्गेसालका ३० वर्षीय रेशम भुसाल घाइते भएको र उपचारको क्रममा लमही अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
मृतकको लाश अहिले लमही अस्पतालमै रहेको छ । बस, बसचालक र मोटरसाइकल वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ८ दोघरेमा पनि मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा बबई गाउँपालिका– ७ डाँडागाउँका ५८ वर्षीय नेत्र बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ । मंसिर २९ गते राति साढे ९ बजेतिर भएको उक्त दुर्घटनामा बुढाथोकीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नम्बर नखुलेको सवारी साधनले ठक्कर दिँदा बुढाथोकीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट प्रहरी टोली गएर मृतकको शव राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरको शवगृहमा पठाइएको छ । ठक्कर दिई फरार रहेको सवारीसाधन खोजतलास तथा अनुसन्धान गर्दै जाँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ९ खर्कुडाँडाका २१ वर्षीय केशवराज डाँगी भएको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । रा ४ प ३९३९ नं.को मोटरसाइकल र चालक डाँगीलाई आइतवार तुलसीपुरबाट नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।